ယူနီဆက်အဖွဲ့ ရုံးခန်းငှားရမ်းခ တစ်လကို ဒေါ်လာ ၉ သောင်းနီးပါး အသုံးပြုနေ
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ UNICEF ဌာနကိုယ်စားလှယ် Bertrand Bainvel ပုံ
Photo: Unicef Website
ယူနီဆက် ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာ ရန်ကုန်မြို့မှာတစ်လကို ဒေါ်လာ ၉ သောင်းနီး ပါး၊ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် ကျပ်သိန်း ကိုးရာနီးပါးနဲ့ ရုံးခန်းငှားရမ်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်တာအတွင်း ရုံးခန်းငှားရမ်းခ နှစ်ဆနီးပါး တက်သွားတဲ့အတွက် အခုဆိုရင် တစ်လကို ဒေါ်လာ ၈၇၀၀၀ နဲ့ ငှားရမ်းထားရတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ယူနီဆက်အဖွဲ့ရဲ့ ဌာနကိုယ်စားလှယ် Bertrand Bainvel က အတည်ပြုပြောကြောင်း ဒီကနေ့ AFP သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ယူနီဆက်ဟာ ယခင်က ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေဘုရားလမ်း မှာရှိတဲ့ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်မှာ ရုံးခန်းဖွင့်လှစ် ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့ ကစလို့ အမှတ် ၂၃-က၊ အင်းယားမြိုင်လမ်း ရွှေတောင် ကြား (၂) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါ တယ်။ ရွှေတောင်ကြားရပ်ကွက်မှာ ယူနီဆက်အဖွဲ့ လက်ရှိရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နေရာဟာ ယခင် စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း ဦးညွှန့်တင် ပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ယူနီဆက်အဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်မယ့် ဘတ်ဂျက်ဘဏ္ဍာငွေထဲက အခုလို ရုံးခန်းအတွက် တစ်လကို ငွေကျပ်သိန်း ကိုးထောင်နီးပါး အသုံးပြုနေတာလို့လည်း သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်း ရွေတောင်ကြားရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတစ်ဦးရဲ့ နေအိမ်ကို UNICEF လို့ခေါ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရံပုံငွေအဖွဲ့က တစ်လကို ငွေကျပ် သိန်း ရှစ်ရာလောက်နဲ့ ငှားပြီး ရုံးခန်းဖွင့်ထားတဲ့ သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေ၊ မေးခွန်းထုတ်မှုတွေ အတော်လေးပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကို မသင်းသီရိ တင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင် ပါတယ်။
That is just for house rent expt if adding to that with their monthly pay and general expenses it can be more than they can do help to the needs.
It is paradoxical that the UNICEF help the rich former general to become richer and richer.The NGOs and UN staff have something in common. They need the people in trouble so that they can enjoy good salary and have jobs to do. They usually hire the best office and work from the top of the hierarchy system. To show their good hearts to the poor children, the UNICEF should hire the office at the slum area . In reality, only the CBOs are the real organizations that are the closest to the public. No brainer. Harrr Ha!
May 22, 2014 09:46 PM
i must say the UNCEF officials are also corrupted....
May 22, 2014 08:36 PM
They have been doing it around the world.
Just that liberal media fail to report.
Using children, Kachin and Rakhine case,alot of NGOs have been profiting handsomely.
May 22, 2014 02:31 PM
UN, NGO, INGO အဖွဲ့အစည်းတွေက အရပ်ရပ်ထောက်ပံ့ငွေ
များကို ခုလိုပဲ လစာငွေအပါအဝင် အထွေထွေအသုံးစရိတ်များ
နုတ်ပြီးမှ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အသုံးပြုကြတာပါ။
May 22, 2014 02:11 PM